ငွေစက္ကူအဟောင်းများကြောင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ငွေစက္ကူအဟောင်းများကြောင့်
Posted by meengelay on Sep 9, 2010 in Health & Fitness, News |7comments
ကိုသေစေနိုင်လောက်သောရောဂါများဖြစ်သည်.တီဘီရောဂါကဲ.သို. ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်သည်ကိုတွေ.ရှိရကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှစူးစမ်းရှာဖွေလေ.လာသူသုတေသီပညာရှင်များက တွေ.ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်.သတင်းလေးတစ်ခုပြန်တင်ပြချင်ပါတယ်….
သူတို.ရဲ.ရှာဖွေလေ.လာတွေ.ရှိချက်အရဟောင်းနွမ်းနေတဲ.ငွေစက္ကူများဟာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေတဲ.လူတွေကိုကူးစက်နိုင်တဲ.ရောဂါပိုးမွှားများဖြစ်တည်ပွားများဖို. အတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပိုးမွှားတွေကြောင်.ဖြစ်နိုင်တဲ.ရောဂါ တွေကတော.တီဘီရောဂါ၊အစာခြေလမ်းကြောင်းနာ၊နမိုးနီးယားလို.ခေါ်တဲ. အဆုတ်အအေးမိရောဂါ၊အစာအိမ်ယောင်ရောဂါစတဲ. လူကိုသေစေနိုင်လောက်တဲ.ရောဂါများဖြစ်ပါတယ်။
ငွေစက္ကူတွေဆုတ်ပြဲတာ၊ဒါမှမဟုတ်ဟောင်းနွမ်းလုံးကြေနေတာတွေဟာငွေစက္ကူမှာပါတဲ. ဆယ်လူလွိုက်လို.ခေါ်တဲ.ဓါတ်တစ်မျိူးကိုဖေါ်ပြပြီးဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးမွှားတွေကို လက်ခံသယ်ဆောင်စေနိုင်တယ်လို. သုတေသီပညာရှင်ကဆိုပါတယ်…
အခြေအနေကတော.အတော်.ကိုဆိုးရွားပါတယ်၊အထူးသဖြင်. လူတွေအများဆုံးသုံးနေကြတဲ. တန်ဖိုးနည်းငွေစက္ကူတွေမှာ ပိုပိုးရောဂါပိုးတွေတွေ.ရပါတယ်လို. လည်းအဲဒီပညာရှင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ငွေစက္ကူအကြွေတွေရှားပါးလာလို.အဲဒီငွေ စက္ကူတွေပိုမိုဆုတ်ပြဲဟောင်းနွမ်းလာရတာဖြစ်ပြီး အနားတွေဖွာလာတာတို.ဆုတ်ပြဲလို.တိပ်နဲ. ကပ်ထားတာတို.ကလည်း ရောဂါပိုးမွှားတွေကိုပွားများစေဖို.ပိုဖြစ်စေတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
အထူးသဖြင်.ကုန်စိမ်းဈေးနဲ.သားငါးဈေးတွေမှာတွေ.ရတဲ.ငွေစက္ကူတွေမှာအထက်ပါ ရောဂါပိုးမွှားတွေကိုပိုပြီးတွေ.ရတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ လူအများပြုလုပ်နေကျဖြစ်တဲ. လက်ကိုတံတွေးဆွတ်ပြီးငွေစက္ကူတွေကိုရေတွက်တာကလည်းရောဂါပိုးတွေ ကူးစေဖို.အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမှတစ်ဆင်.ရေတွက်တဲ. သူတွေကိုလည်းကူးစက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသတ်ခဲ.တဲ.ငွေစက္ကအဟောင်းအနွမ်းအဆုတ်အပြဲ အရွက်၇၀ ရဲ. ၈၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်မှာတီဘီရောဂါဖြစ်စေတဲ.ပိုးမွှားတွေတွေ.ရပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုံးကတော.အဆုတ်အအေးမိရောဂါ၊လည်ချောင်းယောင်ရောဂါနဲ. အစာအိမ်ရောဂါတို.ဖြစ်ပွားစေတဲ.ပိုးမွှားတွေ တွေ.ရပါတယ်တဲ. …
တန်ဖိုးနည်းငွေစက္ကူရွက်တွေမှာပိုးမွှားတွေပါတယ်ဆိုလို.တန်ဖိုးကြီးတဲ. ငွေစက္ကူတွေမှာတော.မပါနိုင်ဘူးလို.မဆိုလိုပါဘူးလို. လည်းညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။သူတို.ကငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းတွေကို အချိန်ကြာမြင်.စွာမကိုင်တွယ်ထားသင်.ပါဘူး၊ပြီးတော. လက်မှာပြည်တည်နေတဲ.အနာ၊ဒဏ်ရာရှိတဲ.သူတွေအနေနဲ. လည်းငွေစက္ကူတွေကိုမကိုင်တွယ်သင်.ပါဘူးလို.အကြံပြုခဲ.ကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ငွေစက္ကူကိုင်ပြီး လက်ကိုသေချာဆေးကြောပါလို. အကြံပြူလိုက်ပါရစေ………….
အိုးဟို။။။ ဒါကြောင့်ကိုး။။ သိပြီ။။သိပြီ
မြန်မာပြည်ကတော့ ငွေစက္ကူဟောင်းတွေကို အစိုးရက စနစ်တကျ မသိမ်းတာ..ပြည်သူတွေသေသေ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ ပြည်သူတွေဟာ ငွေစက္ကူတွေထက်တောင် နွမ်းပါးနေရတာ..ကြာလာခဲ့ပါပြီ..။
အဲဒီလို ဆိုပြန်တော့လည်း တစ်ရှူး ချိုချဉ် ကော်ဖီမစ် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ကြေညာရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ဖြစ်လာသမျှ ဘ၀ကိုတော့ ကြံကြံခံရမှာဘဲ ပြောင်းလဲ ချင်တိုင်း ပြောင်းလဲလို့မှ မရတာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ မပေးတော့လည်း ဈေးသည်က မကျေနပ် ပေးတော့လည်း ဒါဘဲရှိတယ် ဒါနဲ့ လည်ပတ်နေရတာဘဲလေ
အောင်မြတ်လေး..အလုပ်လေးတစ်ခုရပါတယ်။ လစာလေးကောင်းလို့ လေ။ ရီ လိုက်ရတဲ့ပိုက်ဆံဂျာ။ အစုတ်တွေကြီးပဲ။မို စော် ကလည်းဘာနံသလဲမမေးနဲ့ ။
နောက်ဆုံးတော့ …ကိုယ့် ကျန်းမာရေး အရေးကြီးတယ်ဆို ပြီး အလုပ်ပါထွက်လိုက်ရတယ်။ပြီးရော
တခု သတိရလို့ ထပ်ရေးလိုက်အုန်းမယ် ပိုက်ဆံ ရေပြီးရင်တော့ မျက်စိမပွတ်မိစေနဲ့နော် မအူပင်မှာ အမျိုးသမီး တယောက် ပိုက်ဆံ ရေပြီး အမှတ်တမဲ့ မျက်စိပွတ်လိုက်မိတာ မျက်စိတွေ စပ်လို့ ဆေးရုံကို ပြေးရတဲ့ အထိ ဖြစ်တယ် သတိတော့ ထားနော် လက် ကို ချက်ချင်းသာ ရေဆေးကြပါဗျို့။
ဟိုတစ်နေ့က ကားစပါယ်ယာက ပိုက်ဆံ ၁၀၀ အမ်းလို့ ယူပြီးကြည့်လိုက်တော့ တစ်မျိုးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာ.. ၂၀ တန်ရယ် ၁၀၀ တန်ရယ် ၁၀ တန်ရယ်ကို ၃ မျိုးစပ်ထားတဲ့ ၁၀၀ တန်ဖြစ်နေတယ်လေ.. ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး နောက်တစ်ခါ ကားစီးရင်ပြန်သုံးတောပေါ့ဆိုပြီးတောပဲယူထားလိုက်တယ်.. နောက်ထပ်ကားစီးတော့ ပေးကြည့်တော့လဲယူတာပဲ.. သူတို့ကလဲ တွေးမှာပဲ ခရီးသည်တွေကိုပြန်အမ်းလို့ရတယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့.. ဒီလိုနဲ့ပဲ ချာလပတ်လည်နေတယ်… ရောဂါပိုးတွေလည်း ပျံ့နေမှာပဲ…
Maung Dae` ပြောတာဟုတ်တယ် . ၅၀ ၊ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ တန် အကောင်းဆိုတာရှားမှရှားပဲ